တိကျသောသတ္တုအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံ - KGL Machinery and Electronics Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC စက် > တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ
အောက်ဖော်ပြပါသည် Precision Metal Parts နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင် Precision Metal Parts နှင့်ပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါသည်
ပစ္စည်း: G-10 ဖန်ဖိုင်ဘာ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁00X100X100mm
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ - ဤပစ္စည်းသည်ခက်ခဲသော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအလွယ်တကူအက်ကွဲနိုင်သည်။ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာသည်မကြာခဏ ၀ တ်ဆင်ရသည်။ ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသောအခါတိကျမှုသည်စီမံရန်မလွယ်ကူပါ။
လုပ်ငန်းစဉ် - စီအင်စီကြိတ် + အင်းလေးဝါယာကြိုးအင်္ကျီလက်။
မျက်နှာပြင်ကုသမှု - ultrasonic သန့်ရှင်းရေး။
သည်းခံစိတ်: +/- 0.01
ထုတ်လုပ်မှုသံသရာ - 12 နာရီ
ပစ္စည်းကိရိယာ: CNC ကြိတ်စင်တာ
စစ်ဆေးရေးကိရိယာ - CMM သုံးဖက်မြင်ကိရိယာများ။ Thread gauge ပစ္စည်းကိရိယာများ။
တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုခြင်း - နျူကလီးယားစွမ်းအင်လုပ်ငန်းအတွက်ဂဟေဆော်စက်ကိရိယာ။
ပစ္စည်း: G-10 လူမီနီယမ်အလွိုင်း
လုပ်ငန်းစဉ် - ၅ ရိုးတံ CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ - ထုတ်ကုန်သည်မြင့်မားသောတိကျသောလိုအပ်ချက်များ၊ ရာထူးတစ်ခုစီအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်နှင့်အဓိကဒီဂရီတစ်ခုစီအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိပြီးအတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောအနေအထားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Ultrasonic သန့်ရှင်းရေး + ခရိုမိုတိုအောက်ဆိုဒ်
ပစ္စည်းကိရိယာ - ၅ လုံး ၀ စက်စက်
ပစ္စည်း: ULTEM1000 (တင်သွင်းသည့် PEI)
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁50X100X50.8
လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Ultrasonic သန့်ရှင်းရေး
ပစ္စည်း - Natural Acetal Black (တင်သွင်းသောအနက်ရောင် POM)
လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း + အင်းလေးဝါယာကြိုးလက်
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ:တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများမြင့်မားသောတိကျသောလိုအပ်ချက်များ၊ မြင့်မားသောအနေအထားနှင့်ပုံပန်းသဏ္hasာန်လိုအပ်ချက်များရှိပြီးအတွင်းပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောပုံမှန်မဟုတ်သောအနေအထားကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစာရွက်များမှပြုလုပ်သည်။ ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ပျော့ပျောင်းသည်၊ ရုပ်ဆင်းသွင်ပြင်သည်ပုံနှိပ်ရန်လွယ်ကူပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရမည်။
စစ်ဆေးရေးကိရိယာ: CMM three-dimensional, thread gauge, leak tester
တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများလျှောက်လွှာ - Medical
ပစ္စည်း: 7075-T6 လူမီနီယံအလွိုင်း
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ:တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများပုံသဏ္largeာန်များ၊ နံရံများပါးလွှာခြင်း၊ လွယ်ကူသောပုံပျက်မှု၊ မြင့်မားသောဓါတ်တိုးနိုင်မှုတိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှုလိုအပ်ချက်များ၊ စာရွက်စာရွက်များဖြင့်ပြုပြင်ထားသောအနေအထားအနေအထားမြင့်မားမှု၊
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Ultrasonic သန့်ရှင်းရေး + hard oxidation
လုပ်ငန်းစဉ် - စက်ယန္တရားစက်
စစ်ဆေးရေးကိရိယာ: CMM three-dimensional,thread gauge
တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများလျှောက်လွှာ - Medical equipment related vehicle
ပစ္စည်း: TC4 (titanium alloy)
လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း + assembly
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ:The product has many irregular faces, large specifications, thin walls, easy deformation, high requirements on product combination accuracy, high requirements on coaxiality and position. Material processing performance is poor
တိကျစွာသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများလျှောက်လွှာ - Medical equipment + skull minimally invasive surgical instruments
လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း + PVD coating + assembly
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ:The weight of the product is strictly controlled, the product specifications are large, easy to deform, the product combination precision is high, and the coaxiality and position requirements are high. Material processing performance is poor
လုပ်ငန်းစဉ် - စက်ယန္တရားစက် + Assembly
ပစ္စည်း: A2 (SKD11)
လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း + အပူပေးမှု + တိကျမှန်ကန်သောကြိတ်ခွဲခြင်း + CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း + ပန်းကန်ချခြင်း
ထုတ်ယူခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများ:The product has large specifications and is easy to be deformed. The hardness after heat treatment is up to HRC58-60, the flatness and position requirement are 0.02, the position degree is 0.01, and the hole size is 0.01.
မျက်နှာပြင်ကုသမှု - ခက်ခဲသောခရုမ်းခင်း
ထုတ်လုပ်မှုသံသရာ - ၂၄ နာရီ
လုပ်ငန်းစဉ် - စက်ယန္တရားစက် + Large Water Mill
အသုံးပြုခြင်း - စွမ်းအင်အသစ်မော်တာထုတ်လုပ်ခြင်းကိရိယာအသစ်
hot Tags:: တိကျသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ထားပါသည်, စိတ်ကြိုက်, စတော့ရှယ်ယာ, အမှတ်တံဆိပ်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု, မြင့်မားသောတိကျမှု, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအပေါ် အရောင်း, CE, ဖက်ရှင်, နောက်ဆုံးပေါ်, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, လွယ်ကူသော - ထိန်းသိမ်းရန်, နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း, 2019 နှစ်ကအာမခံ, classy, ​​ဖန်စီ
လိပ်စာ: Yong စက်မှုဥယျာဉ်၊ Songbai လမ်း၊ Tianliao အသိုင်းအဝိုင်း၊ Gongming St, Guangming New Dist, Shenzhen City, Guangdong Provice, China
ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ PnD စနစ်ကိုကုမ္ပဏီကတရားဝင်စတင်ခဲ့သည်2019/09/20
2016 နွေ ဦး ပွဲတော်စတင်သည်2019/09/20
မူပိုင်ခွင့် @ 2019 KGL စက်ပစ္စည်းနှင့်အီလက်ထရောနစ် CO ။ , LTD ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။